Home News RW Kheyre oo Shirkadda Dahabshiil ka qaaday lacag baad ah? Waa imasa?
RW Kheyre oo Shirkadda Dahabshiil ka qaaday lacag baad ah? Waa imasa?
Labo bilood ka hor ayaa ay ahayd in markii labaad mudo lix bilood gudahood ah Shirkada Dahabshiil lagu qasbo in ay bixiso lacag baad ah oo lagu sheegay in qayb ka noqonayso lacagtii ku baxday doorashada Gudoomiye Maxamed Mursal.
Waxaa lagu xakumay in ay bixiso $3 Million oo doolars. Dahabshiil ayaa isku dayday in ay ka leex-leexato ama iska dhaqa tirto bixintaas lacagtaas laaakiin RW Kheyre ayaa ugu dhaartay in ayan shaqo ka sii wadi doonin Soomaaliya hadii ayan qayb ka noqon waxa uu ugu yeeray “Bad-baadinta Dowlada”. Lacagta oo lagu wado bacda madoob ayaa waxaa la keenay xafiiska RW Kheyre ka dibna waxaa lagu wareejiyay Fahad Yasin xoghayntiisa. Fahad ayaa waxaa uu ku sugnaa xiligas xafiiskiisa lacagta waxaa loogu geeyay xafiiskiisa. Dabayaqadii sanadkii hoe ayaa ay ahayd markii Duqa magaalda Muqdishu Taabid ii ka wakiil ah RW Kheyre oo lacag $2 Million ka qaaday shirkada Dahabshii taas oo markaas lagu sheegay dayn. Dhowr bil ka dib markii ay dahabshiil lacatii waydiisatayin in loo soo celiyo ayaa loo sheegay in lagu qabtay shaqo Qaran. Waxaa la rumaysan yahay in RW Kheyre iyo Taabid Maxmed ay qaybsadeen lacagtaas.
Previous articleKulankii Fahad Yasin iyo Sharif Xassan maxaa ka soo baxay?
Next articleWakiilka Yurub, Alex Rondos oo dallaalaya Iibinta Hantida Qaranka Soomaaliyeed
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo weerar iyo toosh kadaba qaatay...